30 Hondo Yemunamato Pfungwa dzeKukanganisa Paramende Yemurume | MINYENGETERO MARI
musha Pfungwa dzemunamato 30 Hondo Yemunamato Pfungwa dzeKukanganisa Paramende Yemasimba
30 Hondo Yemunamato Pfungwa dzeKukanganisa Paramende Yemasimba
15 Zvino wakati aparadza masimba neushe, akavaratidza pachena, akavakunda mauri.
Wese akazvarwa patsva mwana wa Mwari chinangwa chaDhiabhori. Naizvozvo chichava upenzi kuti iwe ufunge kuti zvausingazive hazvizive kukuziva. Dhiyabhorosi arikuda kuba, kuuraya and to Kuparadza Hupenyu hwevaKristu uye anoita izvozvo neyake Strongman. Ndiani Strongman? Anesimba is kusindimara the spirit of rima yakapihwa mumwe munhu kana mhuri. Basa remweya yakaipa iyi kubata iyo mhuri kana vanhu vacho nhapwa. Kuita shuwa kuti havafambire mberi kana kufambira mberi muhupenyu, asi nhasi, ndine nhau huru kwauri, tichave tichiita makumi matatu emunamato wehondo dzekunamatira murume akasimba. Munzvimbo yemweya, iro simba rakakura rinotonga ese mashoma masimba. Zita raJesu Kristu izita riri pamusoro pemazita ese uye masimba ese (kudenga, pasi nepasi penyika) nderaJesu Kristu. Naizvozvo sezvaunoita izvi zvehondo munamato mapoinzi, Ndiri kuona Mwari achiremedza munhu akasimba muhupenyu hwako nhasi muzita raJesu.
Strongman mweya inodzivisa, inomira munzira yako kune maropafadzo ako. Ivo vane mutoro wekunetsa wakawanda mudzimba dzechiKristu. Sezvineiwo, Imba yeChristian yega yega ine simba raSatani rakapihwa kwairi naDhiabhori. Kana usiri munamato, haumbofa wakunda murume akasimba wemba yababa vako. Kuratidzwa kwemunhu akasimba kunoonekwa munzira dzakasiyana siyana, pazasi ndehumwe hunhu hwemasimba.
Hunhu hweIye Anesimba
A) Urombo Husingaperi:
Nepo urombo chiri chinhu chepfungwa, mhuri zhinji dziri pasi pehurombo, dzinokonzerwa nemadhimoni ane simba. Kune mhuri dzakawanda dzisina murume akambozvigadzira kubvira zvavambwa, vanogona kunge vakadzidza, asi yega yega achiri kukambaira mune zvemari. Iri ibasa remurume ane simba mumhuri iyi, uyu munamato wehondo inonongedza wekusimbisa murwi ichakusunungura kubva muhurombo muzita raJesu.
B). Kunonoka Kuroora:
Kune mhuri dzakawanda uko vanasikana vasina kumboroorwa nenguva. Hazvina mhosva kuti vakanaka sei uye vane hunhu hwakadii, havafi vakaroora nenguva. Vazhinji vanototanga kuita vana mumba mababa vavo. Iri ndiro basa remweya yakaipa iyi, asi paunenge uchiita izvi zvekunamatira zvehondo zvekuomesa murume akasimba, ndinoona iro kuroora kwakaputswa muzita raJesu.
Hadzisi dzese nyaya dzekushaya mbereko ndedzekurapa, huwandu hwakanaka hwadzo ndohwemweya, kune mhuri zhinji dzakakombwa nehurefu. Ivo vanachiremba havagone kutsvaga chero nyaya nemukadzi nemurume wake, zvakadaro ivo havagone kuve nevana vavo. Iri ibasa remurume akasimba, i declare kuti uchasununguka nhasi muzita raJesu.
D) Kurwara Kunoshamisa Uye Zvirwere:
Kurwara kudzvinyirira dhiabhori, mhuri zhinji dzakarwarwa nezvirwere zvisinganzwisisike, hurwere hunosvibisa mhinduro dzekurapa. Uku kurwara kwakadzika pamweya. Iwo mabasa emunhu ane simba. Asi iwe paunenge uchiita izvi zvehondo munamato mapoinzi ekuremedza murume ane simba, ini ndinoona wapora ipapo nekudanwa muzita raJesu.
E). Rufu Pasinei Nacho:
Iri zvakare ibasa remurume ane simba, kufa kusati kuri kusiri kuda kwaMwari kwehupenyu hwako. Mhuri zhinji dzakanetswa nedambudziko iri. Hapana munhu anogara kwenguva refu mumhuri imomo, harahwa inogona kufa makumi mana. Uku kutukwa kwadhiabhori uye kuchaputswa nhasi muzita raJesu.
Iwo mazita anoenderera mberi nekuenderera mberi, ndapota usatora iyi minamato zvishoma, ita mairi nemoyo wako wese. Irwa kurwa kwakanaka kwekutenda uye ramba murume akasimba ari mumba mababa vako. Kusvika wabvisa zvombo dhiabhori haambokuregedze. Paunenge uchiita izvi zvekunamatira zvehondo zvekuomesa murume akasimba, ndiri kuona Mwari achisimuka nekuparadzira kupokana kwako kwese muzita raJesu.
1. Chero simba rinotsigira demotion uye kunyadziswa kwandiri, nyadziswa, muzita raJesu.
2. Kurangana kwese kwakaipa pamusoro pangu ngakukunde, muzita raJesu.
3. Chero chombo chekuparadza chakanangidzirwa pandiri, dzoka kune watumira izvozvi !!!, muzita raJesu.
4. Chero satanic gang anondimukira, avhunduke, muzita raJesu.
5. Chero simba rinobvunza zuva uye mwedzi zvakanangana neni, wira pasi ufe, muzita raJesu.
6. Chero chipi zvacho muhupenyu hwangu chinovhura musuwo kumuvengi, ini ndakavhara mukova iye zvino !!! Uye paradza chinhu icho, muzita raJesu.
7. Ini ndinoraira vavengi vangu vese. kuzvipira kwandiri mukunyadziswa, muzita raJesu.
8. Ini ndinozvibvisa pane zvese zvemweya zvekuita nevakafa, muzita raJesu.
9. Ndinotaura kuora kumuti wese wakashata wakasimwa pandiri, muzita raJesu.
10. Ngirozi dzaMwari mupenyu, dzosera nyika yevapenyu nevakafa uye dzosera makomborero angu akaba, muzita raJesu.
11. Chero chinhu chipi zvacho chakanaka muhupenyu hwangu chakaiswa pane chero yakaipa artari, ngabviswe, muzita raJesu.
12. Ishe, ndidyara muhupo hwenyu hwunoratidzwa, kuitira kuti ndigopisa satani muzita raJesu
13. Rega shiri yega yega inobhururuka nekuda kwangu igamuchire museve wemoto, muzita raJesu.
14. Wese mweya weguva wakapihwa hupenyu hwangu, ukatadza pasi ufe, muzita raJesu.
15. Vavengi vese veimba vakagadzirirwa kutarisana neni ngavanyadziswe, muzita raJesu.
16. Wese mumiriri wekushama nehurombo, dzikira pasi ufe, muzita raJesu.
17. Nezita raJesu, ibvi rose raSatan rakamira chero munzvimbo yehupenyu hwangu, huta.
18. O Ishe, ndisimudze nezviratidzo nezvishamiso muzita raJesu
19. Ndinoviga kusahadzika kwese kwakaomarara nhasi, muzita raJesu.
20. Ndakavhara muromo wemurume wese akasimba waSatani achidzvova kwandiri, muzita raJesu.
21. Neropa raJesu Kristu, ndinobvisa zvombo murume wese akasimba mudzimba dzaMadzibaba muzita raJesu.
22. Ndakagura musoro weMurume wese akashata nebakatwa raIshe, muzita raJesu.
23. Ini ndinoremedza munhu wese weStrongman ari munzira yangu nemuzita raJesu.
24. Ndinogumisa murume wese ane simba nezita raJesu.
25. Usatani akasimba pinda mubhokisi rako, muzita raJesu.
26. Chero satanic anopesana nekumuka kwangu, ita mitezo, muzita raJesu.
27. Wese munhu akasimba vedombo muhwaro hwehupenyu hwangu awire pasi afe izvozvi, muzita raJesu.
28. Chero chero chiratidzo chinomiririra kwandiri mune rima nyika ngachiparadzwe, muzita raJesu.
29. Ini ndakazvitema ndakasununguka pamaoko enjoka nezvinyavada, muzita raJesu.
30. Humambo hwese hwakaipa, hunonditonga, ngaruvhunurwe, muzita raJesu.
Baba ndinokutendai nekupindura minamato yangu muzita raJesu.
Previous nyaya30 Matipi Emunamato Kuti udzorere Ose
inotevera50 Mirairo Yehondo Yemweya Kuti Uroore
NEMUNYENGETERO WENYAYA yeMALAWI
Maminitsi makumi mashanu Ekunyengeterera Zviratidzo Zvezvishamiso
Masimba Emunamato ane Simba Runyararo
NEMUNYENGETERO WEMUNYAYA YEMAHARA